Maraykanka oo shaaciyey xog ku saabsan weerarada uu 2016 ka fuliyey Somalia. – Radio Daljir
Maraykanka oo shaaciyey xog ku saabsan weerarada uu 2016 ka fuliyey Somalia.
Diseembar 6, 2016 1:01 b 0
Washington, Dec 06 2016- Madaxweynaha xafiiska banaynaya sanadka cusub ee dalka Maraykanka Barack Obama ayaa barlamaanka dalkiisa u gudbiyey war qoraal ah oo uu kaga hadlayo weerarada qorshaysan ee Maraykanku ka fuliyey sanadkaan qaaradda Africa.
Warkaan oo lagu daabacay shakabadda Newsroom Amarica, ayaa waxaa qaybtii uu madaxweyne Obama uga hadlayey arrimaha Soomaaliya waxa uu ku yiri.
“Ciidamadda Dowladda Mareeykanka waxaa ay Sii wadaan Sii wada Ladagaalanka Argagixisadda kana Hortagaya Qatarta Xookaxaha Al-qaaciddo ku Xirran e fadhigoodu yahay Soomaliya ee alshqabaab, Ciidamadda Mareeykanku waxaa ay Lataliyaan, Caawiyaan, Xilliyadda Qaarna ay ku lamaananyihiin, Ciidamadda doowladda soomalia iyo kuwa AMISOM in ta ay Socdaan Howlgaladda Ladaalanka Alshabaab”.
“Ciidamadda mareeykanku waxaa ay Sidoo kale Fulliyeen Duqeeymo iyagoo kaashanaya Ciidamadda Dowladda Soomalia iyo kuwa AMISOM, Duqeeymahaasina waxaa ay dheceen, June 21, July 20, July 31, August 31, September 25, iyo September 28, 2016”.
Maraykanku ma uusan shaacin weeraradaasi deegaamada ay kadheceen, cidda lala beegsaday iyo haddii lagu guulaystay midkoodna, walow uu guul ka sheegtay.
DHEGEYSO-Tayada xoolaha deegaamada Puntland oo kor loo qaadayo.
DHEGEYSO-Culimada Muqdisho oo baaq u dirtay laamaha ammaanka Soomaaliya.
on Wasiiru dawlaha Qorshaynta & Xiriirka Caalamiga ah ee Puntland Prof. C/Qadir C. Xaashi oo la kulmaya qurbajoogta Puntland ee Minnesota, 3-da July.Fa[email protected]